I-LucidPix Iqala Futhi Abasebenzisi Abayisigidi
I-LucidPix, uhlelo lokusebenza olusha lokuhlela isithombe lwe-3D olutholakala ngoJuni 2020, iletha izithombe empilweni ngendlela entsha, ehlanganisa ubuchwepheshe obuningi njengoba kungekho enye inkampani okusamele yenziwe. Uhlelo lokusebenza luqala ngokusemthethweni ku-Product Hunt, iwebhusayithi encike kumavoti womsebenzisi ukuqokomisa imikhiqizo emisha. Uhlelo lokusebenza lwesinguquko ekuqaleni belumenyezelwa njengokukhishwa kwe-beta ku-CES 2020 futhi lenika izithombe zokwejwayelekile kanye nezingcweti ngokufanayo ukudala nokwabelana ngezithombe ze-3D ezimile ngompompi inkinobho. Iyatholakala ukuze ilandwe ku-Google ne-iPhone.
"Abahloli be-beta abangaphezu kwesigidi basisize ukuthi sisebenzise i-LucidPix ukuthi ibe uhlelo lokusebenza olungcono nenobuhlakani," kusho isikhulu esiphezulu kanye nomsunguli osebenza naye uHan Jin. "Abasebenzisi bethu bahlinzekele ngokuqonda nangempendulo yokuqinisekisa ukuthi siyahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende ngenkathi sihlinzeka ngezimo ezivumayo zokudala."
Uhlelo lokusebenza lweLucidPix, luhambisana cishe nayo yonke i-smartphone esetshenziswayo namuhla, luthuthukisa izithombe ngobukhulu obuthathu obunobunono, bese lunikeza abasebenzisi ukuthi babelane ngezinto abazidalile kunoma yiliphi ipulatifomu yezokuxhumana noma phakathi komphakathi osondelene weLucidPix ngempompi elula yenkinobho.
Kuthuthukisiwe okusebenzayo kusukela lapho ukukhishwa kwe-beta kufaka phakathi ukuthuthukiswa okujulile okuqhutshwa i-AI, amakhono okuhlela isithombe athuthukile ngokuqukethwe okunezici ezinhlobonhlobo njengombhalo, izitika, ozimele be-3D nezihlungi, konke kwenziwa ngaphandle kwesidingo sama-lens amabili noma izinzwa ezikhethekile. Abadali bangasebenzisa uhlelo lokusebenza ukuguqula izithombe zesikhathi esedlule, okuvumela izinkumbulo eziyigugu ukuthi ziphume esikrinini. Uhlelo lokusebenza lungabamba izithombe zoqobo ngezici ezintathu. Lokhu kuthuthukiswa okuqhubekayo kubeka iLucidPix ngaphandle kweminikelo eyisisekelo ye-Facebook eyisisekelo se-Facebook, futhi ivumela abasebenzisi ukudala okuqukethwe kwe-3D ngokushesha futhi kube lula kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana, kufaka phakathi i-Instagram, TikTok ne-SnapChat. I-LucidPix ivumela abasebenzisi ukuthi bahlele futhi bathuthukise izithombe zabo ze-3D, bahlinzeka ukuguquguquka okwengeziwe kulokho abakwabelana ngedijithali.
I-LucidPix inamandla emvelo okusiza wonke umsunguli-kusuka kwabathwebuli zithombe abayisebenzisayo basebenzisa abasebenzisi bebhizinisi abaqeqeshiwe — ekwakhiweni kwabo nasekukhishweni kwezithombe ezinobukhulu obuningi, abangasoze bakhumbula. Uhlelo lokusebenza lizoqhubeka nokwenza ngcono nokukhula kumakhono alo ngokuhamba kwesikhathi, kufaka phakathi ukubuyekezwa okujulile kokujula nokubonisa, ukudala izithombe ezinhle kakhulu ze-3D ezitholakala noma kuphi. I-intelligence eyakhelwe kwiLucidPix izothinta amafomethi wokuqukethwe wesikhathi esizayo kusuka ku-AR, VR, 3D kanye nama-holograms kuma-platforms ama-headset, ekhombisa kanye neselula.
"ILucidPix ikuvumela ukuthi uzizwe sengathi wabelana ngokoqobo, nokuhlangenwe nakho komuntu siqu nomndeni wakho nabangane, noma ukuhlola nokuhambela umhlaba ngobuhlakani," kuqhubeka uJin. "Ubuchwepheshe bethu buyabaxhasa abasebenzisi njengoba benza inkumbulo zokuntywila ngezithombe ezibucayi."
I-LucidPix iyatholakala ukulanda i-Android esitolo se-Google Play naku-iPhone e-Apple App Store ngaphandle kwezindleko. Uhlelo lokusebenza lunikezela ukuhlela okungakhawulelwe kwesithombe se-3D, ukufinyelela okukhethekile komphakathi weLucidPix, kanye nokwabelana kuzithangamu eziningi zemidiya yezenhlalo kanye nemiyalezo, ngezibuyekezo ezingaphakathi nohlelo ezivula uhla lwezinketho eziphambili zokuthumela ngaphandle.
Thepha ukuze ulande i-LucidPix
Ungayisebenzisa kanjani i-Hiking Photography Nge-LucidPix →← I-3D Photo App Yakha Ukuxhumana Ngesikhathi Sokuhlukaniswa